China Bottle Sprayer Glass Bottle 10ml Bottle deodorant ukusetyenziswa cosmetic mveliso kunye nabenzi | Comi
Sprayer Glass Bottle 10ml Ibhotile ngevumba lokusetyenziswa cosmetic
Inombolo Inombolo: I-KMPB-009
10ml engenanto Sprayer iglasi iibhotile for Cosmetic Essential Oil Packaging
Yenziwe ngezinto ezimhlophe eziphakamileyo ezineqondo eliphezulu lokungafihli, kwaye zinokucaca ngokucacileyo kwiibhotile zeglasi eziqhelekileyo.
Idityaniswe nekhwalithi yethu ephezulu yealuminium kunye nesitshizi sealuminiumiplastiki umququ , ukutywina okungcono ngakumbi kwaye kulula ukuqhuba kuhambo.
Uyilo olusengqiqweni lomlomo, olukhazimlisiweyo, olujikelezileyo nolugudileyo.
Unyango olusezantsi lwebhotile ngonyango olutyibilikayo, olunqabileyo olunxibayo, olunempilo kunye nokhuselo lokusingqongileyo.
Singumenzi wobuchule kwiibhotile zeglasi, ikwanokubonelela ngeenkonzo ze-OEM kunye ne-ODM ukuhlangabezana neemfuno zakho ezahlukeneyo.
Ulawulo lomgangatho: kwenziwa uthotho lweemvavanyo ukuqinisekisa umgangatho opheleleyo ngokuhambelana neMigangatho yaMazwe ngaMazwe.
Njengomboneleli wezikhongozeli zeglasi ezisemgangathweni, sinokubonelela nge-diffuser, ioyile efunekayo, ibhotile yokuthambisa kunye nebhotile yeziqholo. Ukuthengisa kwangaphambili kunye nenkonzo yasemva kokuthengisa yinto yethu.
ICOMI AROMA – Umthengisi oguquguqukayo, onomdla kunye nabaxhasi bakho.
I-KMPB-009 10ml 17mm 100mm 37g
Ibhotile  Iglasi yeFlint ephezulu
Egqithileyo I-10ml yoLuhlu lweSikwere ngeGlasi yeglasi yokuSebenzisa isiQholo
Okulandelayo: Umgangatho ophezulu we-130ml yeCrystal eQhelekileyo yoLusu lweBhotile yeGlasi
China Glass iibhotile
Umthengisi webhotile yeglasi
Ibhotile Luxury Perfume
10ml Square Mqengqeleki Bottle Ngegolide kunye Silve ...
30ml Ibhotile yeglasi Bottle
Bottle mqengqeleki emnyama kunye nePlastiki Cap
50ml square iglasi isiqhumiso Bottle
10ml Iibhotile zePerfume eziQhelekileyo zeentyatyambo